တရုတ် စိတ်ကြိုက် OEM Roller Slewing Bearing ကို Lifting transport |XZWD စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူ |Wanda
Xuzhou Wanda Slewing Bearing Co.,Ltd.Slewing bearing၊ slewing drives များကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်သူနှင့် တင်ပို့သူဖြစ်ပြီး၊ အဓိကအားဖြင့် ဆိပ်ကမ်းစက်ပစ္စည်းများ၊ သတ္တုတွင်းစက်ပစ္စည်းများ၊ ဂဟေဆက်စက်များ၊ ဆောက်လုပ်ရေးယာဉ်များ၊ မော်ဂျူလာယာဉ်များ၊ single သို့မဟုတ် dual axis ဆိုလာခြေရာခံစနစ်များ၊ နှင့် အသေးစားလေစွမ်းအင်စနစ်များ စသည်တို့တွင် အဓိကအသုံးပြုသည့် Slewing bearing၊ /drives များသည် axial force၊ radial force နှင့် tilting moment ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ slewng bearing ၏ အချင်းသည် 200 mm မှ 5000 mm မှ 200 mm မှ 5000 mm ထိရှိနိုင်ပြီး slewing drive အတွက် 3” မှ 25″ မှ 60 ကျော်အထိ အရွယ်အစား (၉) မျိုး ရှိပါသည်။ PV၊ CPV နှင့် .solar အပူစွမ်းအင်ခြေရာခံခြင်းနယ်ပယ်များတွင် ပုံမှန်နှင့်တိကျသောခြေရာခံခြင်းလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် မော်ဒယ်များ။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ကတ်တလောက်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
3. ပစ္စည်း၊ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များမှ ကုန်ချောအထိ စုစုပေါင်း အရည်အသွေး စီမံခန့်ခွဲမှု၊
4. ပြီးပြည့်စုံသောအင်အားကို အဆက်မပြတ်တိုးတက်စေခြင်း၊ လည်ပတ်နေသောစက်ရုံ2ခုနှင့် ဝန်ထမ်း 230 ကျော်ဖြင့် တည်ဆောက်ဆဲ စက်ရုံ 1 ခု၊ slewing bearings 5000sets/month၊ slewing drives 1000sets/ month.
5. ခိုင်မာသောနည်းပညာနှင့် R&D စွမ်းရည်များဖြင့် အတွေ့အကြုံရှိသော နည်းပညာအဖွဲ့နှင့် China University of Mining and Technology၊ Northwestern Polytechnical University နှင့် Tsinghua University တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
6. ကြွယ်ဝသောပို့ကုန်အတွေ့အကြုံ၊ ထုတ်ကုန်များကိုနိုင်ငံနှင့်ဒေသ 60 ကျော်သို့တင်ပို့သည်။
7. အဏ္ဏဝါ slewing bearing ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပေးသွင်းသူ။
ယခင်- XZWD|ODM စိတ်ကြိုက် လှည့်ကွင်း WD-061.20.1094F ပါးလွှာသော အမျိုးအစား ဝက်ဝံ
နောက်တစ်ခု: XZWD|ထုပ်ပိုးစက်အတွက် ပေါ့ပါးသော လျှောဝက်ဝံများ
တိကျစွာ slewing bearing
သေးငယ်တဲ့ slewing bearing